ကြှနျုပျတို့ကို-ဇိမ်ခံဟိုတယ် faucet Manufacturing အကြောင်း
ဇိမ်ခံကားဟိုတယ်စီမံကိန်းများအတွက်တရုတ် faucet ထုတ်လုပ်သူ Armati-- ။
Armati ရေချိုးဟာ့ဒ်ဝဲအတွက် High-grade ကိုသန့်ရှင်းအမှတ်တံဆိပ်၏ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ အာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီး။ ငါတို့သည်လည်းတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Jiangmen မြို့ (Heshan) ၏မူလအတွက်ရေချိုးခန်း faucet ဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံရှိ ဂျာမန်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက် acquird ။ အစောပိုင်းကာလ 1966 မှစ. ငါတို့သည်နှစ်လယ်ပိုင်း 1990s မှစတင်ပြီး, ရေချိုးခန်းဒီဇိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်းသို့ပါဝင်, ငါတို့သည် faucet နှင့်ရေချိုးလျောက်ပတ်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်းစတင်အသီးသီး Foshan နှင့် Heshan City.Our အတွက်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားဇိမ်ခံမြင့်မားဆုံးကို faucet, ဟိုတယ်ရေချိုးခန်းဟာ့ဒ်ဝဲပစ္စည်းများ, ဟိုတယ်ရေချိုးခန်းစနစ်, အိမ်သာဖလပ်ပါဝင် အဆို့ရှင်, အလိုအလျှောက်အာရုံခံ faucet နှင့်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်အတုကျောက်ကိုရေချိုးခန်းအချည်းနှီးသောနှင့်ရေချိုးကန်နှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ။
Amati ရေချိုးခန်းပြီးသားတစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်တော်တို့အစိတ်အပိုင်းများနှင့် components.With အရည်အသွေးမြင့်မားထောက်ပံ့, တစ်ခါတစ်ရံကျွန်တော်တို့အပြည့်အမော်ဒယ်ထုတ်လုပ်ရန်, ဒီတော့အပေါ်အလွန်ကျော်ကြား Dornbracht, Grohe, Hansgrohe, KWC, Gessi, Zucchetti နှင့်အပါအဝင်များစွာသောဂျာမန်နှင့်အီတလီကိုကောင်းကောင်းသိအမှတ်တံဆိပ်သည် OEM ကုန်ထုတ်လုပ်မှုမိတ်ဖက်ဖြစ်လာ ထုတ်ကုန်များနှင့်သာလွန်နှိုင်းယှဉ်သင့်လျော်မှန်ကန်သောစျေးနှုန်း, ကျနော်တို့ကိုအောင်မြင်စွာဆွဲဆောင်ကြပြီ အဓိကကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအုပ်စု အာရှပစိဖိတ်ဒေသကြီးနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Kempinski, Sheraton, အဆိုပါအဘိဓါန် Venetian နှင့်များစွာသောပိုပြီးသောကြောင့်ရေရှည်လက်တွဲဖော်, ဖြစ်လာ။ (များအတွက်အောက်ပါ Check Armati ဟိုတယ်စီမံကိန်းကိုအမှုလေ့လာချက်)
တရုတ်ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှာတော့ကျနော်တို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်ဖြန့်ဖြူးလည်းတာဝန်ရှိသူတဦးကဖြန့်ဖြူး၏ဇိမ်ခံဟိုတယ်စီမံကိန်းကို market.All အပေါ်အာရုံစူးစိုက် GROHE/ HANSGROHE/ DORNBRACHT စကားလုံး၏လည်း Walmart ကဲ့သို့သောကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံး superstore ၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းများမှာအဆိုပါ home Depot, Lowe ရဲ့, ငါတို့ဇိမ်ခံဟိုတယ်စျေးကွက်ကို segment အတွတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတကာဈေးကွက်ဝေစုအသုံးချင်ပါတယ်။ (များအတွက်အောက်ပါ Check ပြည်ပမှာပြည်တွင်းနှင့်ထဲမှာ Armati ဟိုတယ်စီမံကိန်းကိုအမှုလေ့လာချက်)
တစ်ဦးဟာ့ဒ်ဝဲအဖြစ် ထုတ်လုပ်သူ 20 အနှစ်အတှေ့အကွုံထက်ပိုအတူငါတို့သည်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့စံ range.But အဖြစ် 38 စီးရီး faucet နှင့် 16 စီးရီးရေချိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းများအီတလီဒီဇိုင်နာနှင့်အတူကွဲပြားခြားနားသော faucet စတိုင်နှင့် shape.Partner အဘို့အမှို၏ကြီးမားသောအရေအတွက်စုဆောင်းခဲ့သည် ထုံးစံအသီးအနှံအဖြစ် 30% ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် OEM စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်မှုအဖြစ်> 50% နိုင်ငံတကာစီးပွားရေး။ (များအတွက်အောက်ပါ Check Armati faucet ရေချိုးခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်ကုန် catalog)
ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်ရန်အဆိုပြု ထူးခြားသော faucet အိပ်မက်နှင့်မျှော်မှန်းချက်ရှိသူတိုင်းဒီဇိုင်နာများအတွက်! ကျနော်တို့ OEM ထုတ်လုပ်ရေးအတွက်အနိမ့် MOQ ထား. , ကျနော်တို့တောင်မှစိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်နိုင်သည် သင့်ရဲ့အဘို့အ faucet စီမံကိန်းကိုအထူးသ။ ငါHANSGROHE, GROHE မှတူညီတဲ့အရည်အသွေးမြင့်စံနှင့်အတူထုတ်လုပ်သူ 10 ပတ်ရန်သင့်စိတ်ကူးများ, ပုံကြမ်း, ဒါမှမဟုတ်ဓါတ်ပုံတွေမှ accroding faucet, ခဲအချိန်ကသာ4ရက်ပတ်လုံးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်း magine ။ (ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာသေးခင်ကဥပမာအားဒီဇိုင်းအိုင်ဒီယာမှအစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှု finish ကိုသာ 45 ရက်) ။ ဒီထူးခြားတဲ့, မီးမောင်းထိုးပြခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်နာရဲ့အခွက်တဆယ်၏အကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်း, ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြစ်နှင့်သင့်ဒီဇိုင်နာအမှတ်တံဆိပ်၏လက်တွန်းပါလိမ့်မယ်။ ရုံကအလွန်ကျော်ကြား Starck Philippe တူ။ (ဒီမှာ Check ဟိုတယ်အမှုလေ့လာချက်အဘို့အ Armati စိတ်တိုင်းကျ faucet)
1) ငါ Amati ၏သမိုင်းသိလိုပါတယ်, သငျသညျတရုတ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားအရင်းအနှီးပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဂျာမန်ကုမ္ပဏီအကြားဆက်ဆံရေးကိုဖြစ်ပါတယ်ပါသလား?
ကျနော်တို့ Multi-အမျိုးသားရေးအသင်း, ထိုင်ဝမ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု knowledge.We နှငျ့ကြှနျုပျတို့၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်းသာတူညီမျှသန့်ရှင်း ware.We အတွက်ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ဂျာမဏီစက်ရုံဝယ်ယူကြသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် model.We ကိုဖန်တီးရန်အီတလီထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်နာငှားရမ်းထားနှစ်ဦးစလုံးတရုတ်နှင့် German.In ဖြစ်ကြ တရုတ်ပြည်တွင်းစျေးကွက်နှင့်နိုင်ငံတကာစျေးကွက်ကိုကျနော်တို့သန့်ရှင်းထုတ်ကုန်များအတွက်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် Amati ကိုအသုံးပြုပါ။
2) ငါစသည်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောပထဝီတည်နေရာ, ဧရိယာ, အလုပ်သမားများနှင့် QC အဖြစ်ကိုသင့်ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း, အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင့်ရဲ့အရွယ်အစား, ပိုသိရဖို့လိုပါသနည်း
ကျနော်တို့ပါဝင်ဒီ market.Our ဖောက်သည်၌ကြီးသောအလေ့အကျင့်များနှင့် 10000 စတုရန်းမီတာနှင့်အများဆုံး High-end ငါး Stars Hotel စီမံကိန်းစျေးကွက်အပေါ် 150 worker.We အာရုံနှင့်အတူအလတ်စားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံ, ပိုင်ဆိုင် ဟိုတယ်နှင့်ပြည်ထဲရေးဒီဇိုင်နာ, ကန်ထရိုက်တာ, developer များ (အများအားဖြင့်အသုံးပြုသူအဆုံးသတ်), retail နှင့်ဖြန့်ဖြူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ priority.We JIT ထုတ်လုပ်မှု style.In 2015 ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရုတ်စျေးကွက်လည်ပတ်ငွေကြေးတစ်ခုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့မဟုတ်ပါ12 သန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာဖို့တစ်ခုလုံးကိုကုမ္ပဏီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ငွေကြေးအဘို့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 35 သန်း။
3) faucet စိတ်ကြိုက်ဘယ်လိုနေသလဲ? ငါလက်ပေါ်တစ်ဦးတည်းသာစီမံကိန်းကိုရှိသည်, ငါ faucet စိတ်ကြိုက်မေးမြန်းနိုင်သလဲ
ကျနော်တို့ client ကို Customize faucet ဘို့ပို့ကုန်ထုတ်ကုန်များ၏ 50% ရှိသည်, အသေးစိတ်ဒီမှာစစ်ဆေးပါ။
4) သင့် faucet High-end, ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်တန်းများမှာငါအသေးစိတ်သိလို, သင်ကမိတ်ဆက်ပေးနိုင်သလားမလဲ
ကျနော်တို့ဂျာမန်စံမှတူညီ faucet နှင့်ပန်းကန်နှင့်မျက်နှာပြင်ကုသမှုနည်းပညာကိုလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးမြင့်သောကြေးဝါကိုအသုံးပြုပါ, ကျနော်တို့ Kereox ကြွေသည့်အရာတစ်ခုနှင့် NEOPERL aerator တူအရည်အသွေးအစိတျအပိုငျးအဘို့ကိုယ်ပိုင်တင်သွင်းရုပ်သံလိုင်းရှိသည်။ (ဒီမှာစစျဆေး Armati faucet ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်)
5) သင်ဟိုတယ်ရေချိုးခန်း suite ကို, ခြုံငုံအထုပ်ကိုပူဇော်နိုင်ပါသလား?
အကယ်စင်စစ်ကျနော်တို့ faucet, ရေချိုးခန်းဆက်စပ်ပစ္စည်း, ရေချိုးခန်းစီးရီးများနှင့်ရေချိုးကန်စွန့်ပစ်နဲ့တူသောကြေးဝါအတွက်ရေချိုးခန်းဟာ့ဒ်ဝဲထုတ်လုပ်, ငါတို့သည်လည်းအတူမိတ်ဖက်ဖို့အတုကျောက်ကိုအချည်းနှီးသောနှင့်ရေချိုးကန်ရှိသည်။ ဒဗလျူအီးသင်၏ဒေသခံကျန်းမာရေးအဆောက်အဦသတ်မှတ်ချက်သည်အသင့်လျော်မပြုစေခြင်းငှါ, သင့်လျော်ရေချိုးခန်း၏လူသိကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုဝယ်ယူစီရေချိုးခန်း fitting.Sometimes ဒီဇိုင်းဟိုတယ်ရဲ့တိကျတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ, ရှုထောင့်လိုက်တိုင်းဟိုတယ်ရေချိုးခန်းထူးခြားသည်ကိုငါသိ၏။ ဒါဟာလူတိုင်းကိုယ့်လက်ရှိအမှတ်တံဆိပ်မော်ဒယ်သုံးပြီးလျှင်, ဒီဇိုင်နာဘို့မလိုအပ်လည်းမရှိ, အနုပညာအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စီးပွားရေးထိနျးနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်တစ်ဦးအတှေ့အကွုံ, အရည်အသွေးအာမခံချက်စိတ်ကြိုက်ထုတ်လုပ်သူကိုရှာဖွေပိုကောင်းတယ်။
6) အဘယ်မှာရှိသင့်ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုအခြေငါတရုတ်နိုင်ငံ၌သင်တို့၏စက်ရုံသို့သွားရောက်နိုင်, ဖြစ်သနည်း
တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း Jiangmen မြို့ (Heshan) တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း, ဂွမ်ဒေါင်း province.We ပြည်တွင်းစျေးကွက်အတွက်ရှန်ကျန်းအတွက်ရုံးဖွင့်လှစ်, ကျနော်တို့မြို့အတွက်အရောင်းပြခန်းများ downtown.Wသင်၏စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်ဆှေးနှေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံသွားရောက် elcome ။ တခါတရံ 1 သို့မဟုတ်2ရက်ပတ်လုံးတကယ်တော့အစည်းအဝေးရင်ဆိုင်ရအများအပြားလအီးမေးလ်ဆက်သွယ်ရေးထက်အများကြီးပိုပြဿနာဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသည်။
(ဒီမှာ Check Armati ထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံနှင့်ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်)